DHAGEYSO: Guddoomiye C/fataax “Awooda Shabaab ee Sh/Hoose way yaraatay | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta DHAGEYSO: Guddoomiye C/fataax “Awooda Shabaab ee Sh/Hoose way yaraatay
DHAGEYSO: Guddoomiye C/fataax “Awooda Shabaab ee Sh/Hoose way yaraatay
Guddoomiye ku xigeenka Gobolka Shabeellaha Hoose C/fataax Xaaji oo ka qeyb galayay Barnaamij ka baxayay Tv-ga warbaahinta Dowladda ayaa ka warbixiyay dilalkii iyo Qaraxyadii sanadkii tagay 2017 ka dhacay Gobolkaasi.
Wuxuu sheegay Guddoomiyaha in Qaraxyo iyo dilal qorsheysan Shabaab ay sanadkii tagay ka geysteen Gobolka Shabeellaha Hoose, balse ka maamul ahaan sanadkan ay dejiyeen istiraatiijiyad ay uga hortagaan weerarada Shabaab.
Sidoo kale wuxuu sheegay in ay yaraatay awooda Al-shabaab ay ku lahaayeen Gobolka Shabeellaha Hoose, kadib markii Ciidamada Dowladda, kuwa AMISOM iyo kuwa Mareykanka ay kordhiyeen Dagaalka iyo Duqeymaha ka dhanka ah Shabaab.
Wuxuu sheegay Shabaab xilliyada ay doonayaan in ay weeraro geystaan in ay isa soo uruursadaan, oo aanay aheyn dad badan, wuxuuna tilmaamay Shabaab in aysan laheyn awood ay magaalo ku qabsadaan, marka laga reebo in ay weeraro ka geystaan kadibna ay ka baxaan.
Gobolka ugu colaada badan Soomaaliya xilligan waa Gobolka Shabeellaha Hoose, waxaa ku wada sugan Ciidanka Dowladda oo garab ka helaya kuwa AMISOM, Al-Shabaab iyo Maleeshiyo beeleedyo mararka qaar dagaalama, sida la ogsoon yahay Shabaab bilihii ugu dambeysay waxa ay kordhiyeen weerarada ay ka geysanayaan saldhigyada Ciidan ee degmada Afgooye.